निर्माण सकिनै लागेको चार ठूला परियोजनाले फोहर र अव्यवस्थित जनकपुरको मुहार फेरिँदै गएको छ। सहरभित्रका चिल्ला सडक, ६ लेन सडक, ब्रोडगेज रेल्वे र रात्रिकालीन उडानले धार्मिक तथा ऐतिहासिक सहर जनकपुर व्यवस्थित बन्दै गएको हो। पछिल्लो समय जनकपुर सफा र व्यवस्थित बन्दै गएको छ।
पछिल्ला ठूला परियोजना सम्पन्न भएपछि यो सहर सुन्दर र आकर्षक बन्नेछ। धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न जानकी मन्दिरलाई झकिझकाउ पारिँदै छ। सहरका प्रत्येक चोकमा राखिएका टावर लाइटले यहाँको रात्रिकालिन माहोल झन् उज्यालिएको छ।
धमाधम ६ लेन
जनकपुरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि भारतको जटही नाकासम्म जोडने ६ लेनको ४० किलोमिटर व्यापारिक मार्ग तीव्र गतिले निर्माण हुँदै छ। जनकपुर–जटही १४ किलोमिटर सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने जनकपुर–ढल्केवर खण्डको २६ किलोमिटर सडक निर्माण धमाधम हुँदैछ ।
यस सडक खण्डमा तीव्र गतिमा कालोपत्रे र कल्भर्ट निर्माण कार्य भैरहेको छ । भारतको पिपरौन नाकादेखि सीमावर्ती जटही हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने जटही–जनकपुर–ढल्केवर सडक ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ। २०७२ जेठमा सम्झौता भएको जनकपुर–ढल्केवर खण्डको २६ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य धमाधम हुँदैछ। आगामी माघसम्म ६ लेन सडक निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने फराकिलो सडक निर्माण भएपछि सिमावर्ती जटहीदेखि ढल्केवर आसपास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य छ। जनकपुर–ढल्केवर खण्डमा विभिन्न उद्योगधन्दा, होटल रेस्टुरेन्ट तथा निजी घर निर्माण भइरहेका छन्।
सडक ६ लेन हुने भएपछि सडक छेउको जग्गाको मूल्य तीन गुणाले बढेको स्थानीय बताउँछन्। यो सडक निर्माणपछि भारतको कोलकातादेखि काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा व्यापारिक सामग्री पुर्‍याउन सजिलो हुने उद्यमीको विश्वास छ।
चिल्ला सडक सञ्जाल
सडक विस्तारले जनकपुर गुल्जार बनेको छ। हिलो र धुलोले अस्तव्यस्त वातावरणबाट जनकपुरवासीले पछिल्लो समय छुटकारा पाएका छन्। सडक बिस्तारपछि साँघुरा सडक व्यवस्थित बनेका छन्।
पैदलयात्रीका लागि फुटपाथ बनाइएको छ। धार्मिक नगरी जनकपुर चिल्लो र सुन्दर देखिन थालेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास पूर्वाधार परियोजना (आइयुडिपी) अन्तर्गत निर्माणाधीन कालोपत्रे सडक, ढल र फुटपाथले जनकपुरको रूप फेरिन लागेको हो।
परिक्रमा सडकलगायत जनकपुर बजार क्षेत्रमा भूमिगत नाला र सडक निर्माण तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा काम गर्ने गरी २०६९ सालमा सम्झौता भएको थियो। सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १६.८८ किलोमिटर र एकीकृत सहरी विकास पूर्वाधार परियोजना (आइयुडिपी) अन्तर्गत १२.५४ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य जारी छ।
८३ करोड ५१ लाखमा सघन सहरी विकासले जनकपुरभित्र सडक निर्माण गरिरहेको छ। आइयुडिपीले भेरिएसन बढाएर १ अर्ब २३ करोड ५० लाखमा परिक्रमा सडक निर्माण गरिरहेको छ।
रेलको पर्खाइमा जनकपुर
जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुँदा जनकपुरमा स्थानीय उद्योग व्यवसायीको दबदबा थियो। उतिखेर रेलसेवाले जनकपुरलाई गुल्जार बनाएको थियो। तर, रेलसेवा बन्द भएपछि यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो।
पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन र त्यसपछि नगर क्षेत्रमा सडक बिस्तारका नाममा जथाभावी भत्काइएका संरचना निर्माण नभएपछि यहाँको व्यापार चौपट भएको छ। व्यवसाय खस्किँदै गएपछि ऋण र कर्जाको दबाब थेग्न नसकेर केही विस्थापित भएका छन्। केही भारत पलायन भएका छन्।
आगामी कात्तिकदेखि सुरु हुने भनिएको रेल सेवाले जनकपुर क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिको सपना पलाउन थालेको छ। पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर गरी जम्मा ६९ किलोमिटर रेल्वे सेवाका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।
रेल सेवाका लागि विभागले ८५ करोडमा दुईवटा आधुनिक रेल खरिद गर्न भारतको कोणर्कोन रेल्वे करपोरेसनसँग सम्झौता गरिसकेको छ। तीन महिनाभित्र रेल नेपाल आइपुग्ने अनुमान छ।
‘रेलमार्ग सञ्चालनपछि सामान ढुवानीका लागि सुविधा हुन्छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट मालसामान ल्याउन सहज हुन्छ, महिनौंदेखि ठप्प भएको व्यापार फस्टाउँछ,’ व्यवसायी विजय साहले भने। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले रेल सञ्चालनपछि व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने दाबी गरेको छ।
‘जयनगर–जनकपुर रेलसेवा सञ्चालनपछि पछिल्लो मधेस आन्दोलनका बेला ६ महिना बन्द र सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले उद्योगी व्यवसायीले विगतमा व्यहोरेको घाटा परिपूर्ति हुन्छ,’ उनले भने ।
अर्थशास्त्री डा. वरुणलाल कर्णले रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि यहाँ पर्यटन उद्योगको विकास भइ व्यापारसमेत फस्टाउने बताए। ‘व्यवसाय फस्टाएपछि रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुन्छन्,’ उनले भने। जनकपुरमा धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले भारतबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आगमन हुने र पर्यटन उद्योगले राजस्व संंकलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उनको दाबी छ।
छिट्टै रात्रिकालीन उडान
जनकपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले विमानस्थलमा उपकरण जडान र भौतिक पूर्वाधारका कामले समेत तीव्रता पाएको छ।
विमानस्थल रात्रिकालिन उडानका लागि तयार छ। यात्रुको चाप बढ्दै गएपछि सेवा विस्तार गरिएको छ। उडानसमेत थपिएका छन् । हुस्सु लागेका बेला र रात्रि उडान सहज रूपमा गराउनसक्ने गरी सुविधा थपिएको छ ।
विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै हवाई इन्धनको सुविधासमेत थपिएको छ । आयल निगमले ट्यांकरबाट रिफ्युलिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँदा भाडासमेत कम भएको छ।
जनकपुर प्रदेश २ को राजधानी तोकिएपछि यहाँ विमानबाट आवतजावत गर्नेको संख्या बढेको छ। जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने पर्यटक बढेका छन । प्रदेश राजधानी भएपछि प्रशासनिक कामले पनि आउजाउ गर्नुपर्ने भएकाले यात्रु चाप बढेको छ। पछिल्ला केही महिनायता जनकपुर विमानस्थलमा हरेक महिना २ हजारजति यात्रु बढेका छन्।
धनुषामा सामुहिक बालत्कारको भिडियो समाजिक सञ्जालमा राखेपछि …..
Posted on May 26, 2018 May 26, 2018 Author शैलेन्द्र क्रान्ति
शैलेन्द्र क्रान्ति – जनकपुरधाम, जेठ १२ गते । धनुषामा एक बालिकामाथि सामुहिक बालत्कारको घटना एक महिनापछि सार्वजनिक भएको छ । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका २ राजपुरमा गत वैशाख १० गते एक विवाह समारोहमा राति १४ वर्षकी बालिका माथि सामुहिक बालत्कारको घटना भएको थियो । पीडितका अनुसार घटनाको भिडियो बनाए संलग्नहरुले कसैलाई बताए घरपरिवार सबैलाई ज्यान मार्ने […]
संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शहिदगरमा सरसफाई
नरेशचन्द्र बरबरिया, धनुषा असोज २ गते । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा संविधान दिवसको अवसरमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा वेश क्याम्प यदुकुहाको आयोजनामा सरसफाई कार्यक्रम भएको हो । शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. ३ यदुकुहामा रहेका विभिन्न मठमन्दिर लगायत आसपासका क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको छ । उक्त सरसफाई कार्यक्रममा ईलाका प्रहरी […]
सर्लाहीमा पौडेल घटनाको राष्ट्रिय मानवअधिकारले अनुसन्धान गर्ने
Posted on June 22, 2019 June 22, 2019 Author टुडे पाटी
काठमाडौं, असार ७ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्लाहीमा दोहोरो मुठभेडको क्रममा बिहीबार प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेल घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले शक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी त्यस घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न केन्द्रीय कार्यालय एवम् प्रदेश नम्बर २ कार्यालयबाट […]